Ihe ngbanye ugwu → na adọba ụgbọala • Nkuchi • Ultra Disc Concrete®
Obere ulo mee obere ihe owuwu agwakọta Oghere obodo ma ọ bụ n’elu ụlọ ma ọ bụ nye ya agwa maka otu ebe. Posts dị ịtụnanya, nke oge a oche, n'igwe, tebụl, ogwe osisi ifuru ya na ifuru, mkpofu ahihia, anyịnya igwe kwụ ọtọ, mkpuchi osisi na ebe egwuregwu na-eme ka oghere dịkwuo elu ma mee ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche, mara mma ma na-arụ ọrụ.
View katalọgụ ngwaahịa dị n'ịntanetị >> ma ọ bụ budata katalọgụ >>
Ihe ndi di otua bu ihe ndi n’ewu n’ime obodo na-egbochi mmegharị okirikiri na mpaghara enyere. Ha bụ ihe ịchọ mma ma n'otu oge ahụ nwee ọrụ dị mkpa, na-egbochi ịdọba ụgbọala n'ebe adịghị mma.
Varietydị dị iche iche na-enye ohere maka ịhọpụta posts ndị dabara adaba nke kwekọrọ na gburugburu obodo mepere emepe.
A na-eji osisi, ígwè na ihe ndị a na-ejikarị arụ ọrụ mee ihe.
Ahịrị osisi dị na mgbidi, n'adịghị ka ogwe osisi, a na-eji ihe eji achọ ihe nke na-anaghị adọkpụ ma na-eguzogide ọgụ ahụhụ.
Ihe ederede siri ike ma sie ike.
A na-ejikarị ha arụ ọrụ n'ugbo, n'ubi ụlọ na n'azụ ụlọ, yana n'ohere ọha ọha mepere emepe, dịka na-adọba ụgbọala ma ọ bụ fencing.
Mpempe mgbidi dị na mgbidi bụkwa akụkụ dị mkpa maka arịa ụlọ, ọ bụghị naanị na mpaghara ọha, kamakwa na ụlọ nkeonwe.
A na-ekwu na a na-adọ ọnụ ya ka ọ rụọ ọrụ nke ọma mgbe ọ na-eme nke ọma nsu osisinke ahụ na-eme ka ha dị elu. Ihe aga eme ha ga-ekpebi ike ha na itinye ya n'ọrụ. Enwere ike iji osisi, osisi, ihe ma ọ bụ nke galvanized mee igbe osisi.
Ha dị iche na ọnụahịa, ịdị ogologo ndụ, ịdị mfe nke nrụnye na usoro ọgwụgwọ.
Ọ bụ ezie na ihe ntụchi Ihe ha dịgide ndụ, ọghọm ha bụ ngwugwu na mgbawa. Ọ bụrụ na mmiri anakọta na mgbape, ọ nwere ike nju oyi n'oge oyi ma mee ka akụkụ nke post ahụ mebie.
Peoplefọdụ ndị mmadụ na-ahọrọ iji ihe ndị ọzọ eme, gụnyere: galvanized nchara, igwe ma ọ bụ osisi.
Posts dị ịtụnanya Ha na-adịkarị ọnụ karịa ndị ogbo ha, ma ọ naghị achọ mmezi na impregnation kwa afọ.
Na mgbada bụ na ọ bụ mediocre ihe posta ọ dị kilogram 40, nke na-abawanye ọnụ ahịa mgbakọ, ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, ọkwa ọkpụrụkpụ na-enye nkwado siri ike.
Enwere ike ịzụta ihe mkpuchi ụlọ na ụlọ ahịa ndozi ụlọ ma ọ bụ nke si n'aka onye nrụpụta, nke na-enye ngwaahịa n'ogologo ogo ya na nke na-adịghị ahụkebe.
Posts dị ịtụnanya Formdị Ọdịdị Obodo
Ihe eji eme obodo nke ihe eji eme ihe bu ihe eji emeputa ihe nke oge a, a na-enyocha akwa nke ihe ndi a site na nyocha nke ihe na usoro teknụzụ.
Companylọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ kachasị mma ụlọ ihe owuwu na ndị na-ese ihe, nke na-ahụ maka ụdị kacha mma na arụmọrụ nke obere ihe owuwu na-arụpụta site na ya.
City Design bụ naanị onye nnọchi anya ụlọ ọrụ ndị Italy bụ Metalco na Bellitalia na Poland.
Metalco na-enye nnukwu ogige na ihe eji ewu ụlọ n’obodo na osisi.
Ihe a na-enye gụnyere akụkụ nke ohere ime obodo, ogige ntụrụndụ, n'okporo ụzọ, ubi na ọdụ.
Metalco na-arụpụta oche, bọọdụ okporo ụzọ, ọkwa, bọọdụ ozi, nkpuchi osisi, ite osisi, oche anyịnya igwe na ụdị dị iche iche nke okporo ụzọ, dịka, ọdụ ụlọ obodo.
Bellitalia bụ otu n'ime ndị isi ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ihe, marble na eke nkume mkpokọtanke eji eme ihe ndi eji eme uzo.
E hiwere ụlọ ọrụ ahụ na 60s na andtali ma a ka na-ahụ ya site na ngwaahịa dị elu, ihe ohuru na imewe ọgbara ọhụrụ.
BELLITALIA Srl na - arụpụta ihe ndị mebere n’usoro ime obodo. Enwere oche ihe eji eme ọfụma, bọọdụ ozi, ite na okwute, isi iyi, ebe a na-amachi okporo ụzọ na ebe a na-egwu egwu, ma ọ bụ ebe a na-ahụ anya ma ọ bụ ebe a na-egwupụta okwute.
Bellitalia na - emepụta ma na - ere ọtụtụ narị ihe dị egwu ma mara mma, dabara nke ọma na oghere obodo ọ bụla.
Iji mee ka nnakọta ahụ dịkwuo mma, a na-agbakwunye ihe ndị ọhụrụ na ọrụ ndị na-apụta: igwe anaghị agba nchara, nkedo ígwè na osisi n'ụzọ ha ga-adaba na ihe ahụ ma mepụta ụdị ọhụụ.
Na mmepụta ya BELLITALIA® na-ejikwa akụkụ nke okwute dị oke ọnụ na okwute mara mma nke agba mara mma na njiri mara.
Taa Bellitalia bu onye ndu n’edeputa na ire ahia ulo. Ọ na-eji ihe dị ka ụdị ihe dị iche iche (HPC, UHPC), akpọrọ okwute amaliteghachi, mkpokọta granite, ihe na-egbu maramara, osisi na nchara.
Ihe eji emeputa ihe nke BELLITALIA® ji sitere na Dolomites gbara ya gburugburu. Nke a na-enye ohere iji belata mmanụ ọkụ na ikuku ikuku CO2 dị ala maka mbufe ha.
A na-emegharị ihe ndị dị n’ite okwute ndị dị na andtali ma jiri ha mepụta mkpọkọta nke okwute dị oke ọnụ.
Ihe dị n'ime, n'ụzọ a bụ ihe eji arụ ọrụ ọfụma, na-adịgide adịgide ma nwugharị ya, yabụ ọnụọgụ nke iji ojiji a ezughi oke.
Ntinye ihe nlere anya
N’afọ 2015, BELLITALIA® mepụtara usoro eji emepụta ihe ọhụrụ Iche-iche arụ.
O bu ihe ohuru n’enye gi ohere imeputa ihe ohuru ma dikwa nma n’ime ha.
Iche-iche arụ bụ ụghalaahia edenyere aha nke Bellitalia naanị. Emebere ya na ndi sayensi si Ngalaba nke Matter, Environmental na Urban Engineering na Mahadum Marche (SIMAU) na ulo nka ama ama ama zuru oke.
Ihe ohuru ohuru emere site na iji teknụzụ kacha ọhụrụ Ultratense Concrete® bụ plastik dị oke mma yana ekele maka njirimara ya, enwere ike ịfe ya na ebu.
UTC® bụ akụrụngwa nwere akụrụngwa na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-enyere aka imepụta ngwaahịa nwere oke dị omimi na oghere atọ nwere akụkụ atọ.
ihe postsihe nkpokoro isiigbe nsuEbu n'ihi ihe postsfences, ihe postspatentihe postscastorama ihe postsọnụahịa ihe mgbochiihe posts ndepụta ndepụtaposts maka mgbidiihe ndozi maka okpo uloihe ederede maka orchardihe ndozi maka ntupumgbidi osisi maka oke osisiigbe nsue ji achọ ihe postsihe eji adọba ụgbọalaosisi gbara ọkpụrụkpụ n'okpuru okpuru alamgbidi ihe n'okpuru ọnụahịa terraceihe posts akụkụnsu osisiigbe nsucastorama ihe nsu postsna-adọba ụgbọalaihe eji adọba ụgbọalaNtinye ihe nlere anya
A pụrụ iji sistemu eji eme ihe na-agbakọ n'ọhịa ahịhịa akọrọ. Ugbu a na ...